သားရေမိတ်ဆက် - Jiaxing Rongqi Co. , Ltd ။
နေအိမ် > ကြှနျုပျတို့အကွောငျး > သားရေနိဒါန်း
1. စူပါ Flocking ပစ္စည်း
အားလုံးအရောင်ခြောက်ခု။ အနက်၊ ရေတပ်၊ လိမ္မော်၊ အညို၊ အဝါနှင့်အနီရောင်တို့ရှိသည်။
၎င်း၏နူးညံ့သိမ်မွေ့မှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်အားလုံးသည်နှိုင်းယှဉ်။ မရသောကြောင့်၎င်း၏အခွန်အပါအဝင်
၎င်း၏စျေးနှုန်းကိုလက်မခံပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးနမူနာကိုမမေးမြန်းပါနှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒါဟာသာမန်ဇိမ်ခံကားကိုအသိအမှတ်ပြုမှုအတွက်အသုံးပြုသည်။ အရောင်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ခံစားမှုအပြင်စွမ်းအင်အသစ်၏ပတ် ၀ န်းကျင်ကာကွယ်မှုသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သငျသညျသေးငယ်တဲ့နမူနာပေးပို့နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အရောင် ၉။ အနိမ့်ဆုံးအမှာ ၁၀၀၀ မီတာနှင့်နမူနာအရွယ်အစားသေးငယ်သည်၊ ၎င်း၏တန်ဖိုးသည်အသေးစိတ်ဖြစ်သည်။
3. သာမန် Superfiber
Litchi ပုံစံ PU microfiber
၄။ Semi PU ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိ Napa Stripes အားလုံးမှောက်မှောက်သည်
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှအပအခွန်ဖယ်ထုတ်ပြီး RMB ၂၅.၅၄-၃၀.၄၉ / မီတာ (Hangzhou, Zhejiang)
M ¥ 2M
အထူ - ၁.၀ မီလီမီတာ၊ အကျယ် - ၁၃၇ စင်တီမီတာ
5. PU သားရေအလင်းပြန်လာ
ရေကြောင်းမပါသောအခွန်ကိုဖယ်ထုတ်ပြီး ၈၀.၅-၈၄ ယွမ် / ခြံ (Dongguan, Guangdong)
အထူ: ၀.၆ မီလီမီတာ၊ အကျယ်: 137CM
၆။ PU သားရေ Pull-up သားရေ Microfiber
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှအပအခွန်ကိုဖယ်ထုတ်ပြီး ၉၅-၁၀၀ ယွမ် / ခြံ (Guangzhou, Guangdong)
အထူ: ၁.၄ မီလီမီတာ၊ အကျယ်: 137CM
မင်္ဂလာပါ။ အလုပ်များနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော့်ရဲ့စာကိုဖတ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်၏လက်ရှိထောက်ပံ့ရေးစနစ်၊ ပေးပို့သည့်ရက်များ၊ အမျိုးအစားများနှင့်စျေးနှုန်းများကိုသင်မကျေနပ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များကိုကျွန်ုပ်အားပြောပြခွင့်ပြုမည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည်တရုတ်နိုင်ငံမှာသားရေကုန်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်သားရေထုတ်လုပ်မှုပုံစံ ၂၀၀၀ နှင့်နှစ် ၂၀ ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခိုင်မာသည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစွမ်းရည်နှင့်အလေးချိန်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏အလေးထားမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကိုအခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ခွဲခြားထားသည်။ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်နှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်အလမ်းရရှိရန်မျှော်လင့်ပါသည်။